Vaovao - Tsy lafo ny vidin'ny serivisy fiverenana Amazon FBA?
Ny vidin'ny serivisy fiverenana Amazon FBA dia tsy lafo?
Voalohany indrindra, nahoana ny vokatra FBA no tokony haverina amin'ny trano fitehirizam-bola any ivelany?
Satria i Amazon dia manana fehezanteny mazava toy izany: ilay kaody bara marika mitovy amin'ny trano fanatobiana entana, 6 volana dia tsy afaka miverina any amin'ny trano fitehirizana. Midika izany fa raha miverina entana ny mpanjifa, ny mpivarotra dia tsy ho afaka mametraka azy ireo eo amin'ny talantalana amidy, izay hiteraka fanangonan-karena, hiteraka fahasahiranana amin'ny renivohitra miasa sy ny toe-javatra hafa, ary hisy akony lehibe kokoa amin'ny mpivarotra.
Raha toa ka miverina ao an-trano fitehirizam-bokatra any ivelany, raha simba ny entana dia soloin'ireo mpiasa mifandraika amin'izany ny marika ho an'ireo entana naverina, mba hamerenany azy ireo indray any am-pivarotana.
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny trano fanatobiana entana any ivelany any Etazonia dia samy mampiseho entana sy serivisy fifanakalozana marika. Na izany aza, mazàna, ny trano fanatobiana entana any ivelany dia manaiky ny mpanjifa hamerina amin'ny laoniny ny entana any amin'ny trano fitehirizan-tany any ivelany, noho izany ny fanodinana fiverenana dia ataon'ny trano fitehirizam-bokatra FBA any Etazonia. Mpivarotra Amazon maro no tsy dia mazava loatra momba ny dian'ny FBA Amerikanina miverina any amin'ny trano fitehirizam-bola any ivelany. Manaraka izany, YiXing Global Logistics Xiaobian dia hilaza aminao ny tena dingana amin'ny fiverenan'ny FBA any amin'ny trano fitehirizam-bola any ivelany.
Dingana tokony hiverenan'i US FBA trano fitehirizana any ivelany:
Rehefa avy nifandray tamin'ny mpanjifa ny mpivarotra dia tokony handeha any amin'ny fitantanana ambadiky ny Amazon mba hitady ny filaminana mifanaraka aminy ary hisafidy sy hanala azy. Asehoy avy eo ny adiresin'ny trano fanatobiana entana any ivelany, ary avy eo ny mpivarotra dia afaka manatanteraka ny tena fisintomana ny FBA.
Amin'ny ho avy, ny mpivarotra dia tokony hameno ihany koa ny latabatra antontan'isa vokatra novokarin'ny trano fitehirizam-bokatra any ivelany, ary avy eo handefa ny rakitra PDF any amin'ny trano fitehirizam-bola any ivelany. Raha misy ny fangatahana, ny trano fitobiana any ivelany dia afaka manampy ny entana hanova ny marika ihany koa.
Aorian'ny fanovana ny marika, ny trano fanatobiana entana any ivelany dia hipetraka ary halefa any amin'ny US FBA manokana; Raha vantany vao ao anaty trano fitehirizana ny entana, dia afaka mametraka azy ireo eo amin'ny talantalana indray ny mpivarotra.
Ny vidin'ny FBA miverina amin'ny trano fivarotana any ivelany:
Miverina amin'ny ankapobeny ny trano fanatobiana entana any ivelany, dia hamorona ny saram-panompoana mifanaraka amin'izany, ny sarany fitantanana ary ny sarany fandefasana.
Ny saram-pandefasana dia ny vidin'ny famerenana ny trano fitehirizam-bola any ivelany any amin'ny trano fanatobiana entana FBA ary ny sandan'ny fitaterana indray ny trano fitehirizam-bokatra any amin'ny trano fanatobiana FBA. Ny vola lany amin'ny fitantanana dia vokatry ny entana nalaina avy tao amin'ny trano fanatobiana entana. Ny saram-panompoana mazàna dia ny frais amin'ny serivisy famindrana FBA sy ny saram-pametahana marika, ary mazava ho azy ny fenitra fiampangana.